Taliska Booliiska oo ka warbixiyey qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Taliska Booliiska oo ka warbixiyey qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Booliiska ayaa shaciyay tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Afhayeenka Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay agagaarka Dugsiga tababarka Janeraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho.
Sida uu sheegay afhayeenka Ciidamada Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali oo shir jaraa’id u qabtay Warbaahinta, qof isku soo xiray waxaabaha qarxa ayaa isku qarxiyay Maqaaxi ay ku sugnaayeen dad u badan Shacab.
Afhayeenka ayaa intaas ku daray in qaraxa ay ku dhinteen Lix qof oo uu ku jiro qofkii is qarxiyay halka ay ku dhaawacmeen 8 qofood oo kale.
Dhamme Sadiiq ayaa sheegay in Ciidamada booliska Soomaaliya ay baaritaan ku hayaan sida uu qaraxa u dhacay.
Qaraxii Maanta ayaa wuxuu ahaa mid xoog badan, oo dhawaqiisa qeybo badan oo kamid ah magaaladda laga maqlay.
Wali ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, oo noqonaya midkii ugu dambeeyay silsilado qaraxyo ah oo ka dhacaya Muqdisho mudooyinkii dambe xili doorashadda ay soo dhawdahaya, islamarkaana uu jiro habac-sanaan dhanka amniga.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa faraha ka baxay, iyadoo dowladda iyo hay'adihii amniga ay ku mashquuleen siyaasadda dalka.